डा. विष्णुविभू घिमिरे (६७) नेपाली कविताका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । विक्रमको २०३० को दशकदेखि कविता लेखनबाट साहित्ययात्रा सुरु गरेका घिमिरे साहित्यिक पत्रकारिता र अखबारी पत्रकारितामा पनि स्थापित व्यक्तित्व हुन् ।
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपतिसमेत भइसकेका घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पसमा ३ दशक प्राध्यापन पनि गरेका छन् ।
अवकासप्राप्त जीवन साहित्य लेखन र साहित्यिक अभियानमा समर्पण गरिरहेका छन् घिमिरे ।
डा. विष्णुविभू घिमिरेको जन्म पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामको बरबोटेमा १० भदौ २०१० मा भएको हो । पिता हरिनारायण र माता तोरणकुमारीका ६ सन्तानमध्ये पाँचौँ सन्तान हुन् घिमिरे । उनीमाथि २ दिदी र २ दाजु छन् भने मुनि एक भाइ र एक बहिनी ।
मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका घिमिरेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी धेरै, परिवार ठूलो । बुबा हजुरबुबा, हजुरआमाका एक मात्र छोरा ।
स्वाभाविक हो, पहाडी जीवन, परिवार ठूलो, आय मध्यम, परिवार चलाउन केही गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ नै । तर, घिमिरेको परिवार ठूलो भए पनि खान, लगाउन खासै समस्या भएन । बुबा, आमाले खेतीपाती र अन्य हिसाबले परिवार चलाउन अप्ठ्यारो हुन नदिएको उनको भनाइ छ ।
आफू पहिल्यैदेखि शान्त र अन्तरमुखी स्वभावको भएको बताउँछन् घिमिरे । यस कारण बच्चामा खासै उट्पट्याङ गरेको सम्झना छैन उनलाई ।
सामान्य सिधा बालकको व्यवहार जस्तो हुन्छ, आफ्नो त्यस्तै भएको उनी बताउँछन् ।
‘मलाई चकचक र उट्पट्याङ कहिल्यै मनपरेन’, घिमिरे भन्छन्, ‘शान्त स्वभाव नै मेरो परिचय थियो र आजसम्म त्यस्तै छ ।’
छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा उनका बुबा, आमामा थियो । विद्यालयहरू खुल्दै गरेको समय थियो । गाउँगाउँमा प्राथमिक विद्यालयहरू खुलिरहेका थिए ।
शिक्षकहरू भने भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम, असम, मणिपुरतिरबाट ल्याइन्थ्यो किनभने नेपालमा पढाउने शिक्षकहरू उत्पान भइसकेका थिएनन्, पडालेखा व्यक्तिहरू थोरै मात्र थिए ।
अर्को कुरा, भारततिरका शिक्षक योग्य र तगडा हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो त्यसबेला ।
उनले घरमै अक्षरारम्भ गरे । कक्षा ३ सम्म बिब्ल्याँटे प्राथमिक विद्यालयमा पढे । त्यसपछि ४ कक्षा पढेनन्, एकैचोटि कक्षा ५ मा भर्ना भए इलाम बजारमा रहेको पब्लिक आदर्श हाई स्कुलमा ।
बुबा, आमा त्यहीबेला झापा झरेपछि उनको परिवार सबै झापाको ज्यामिरगढी आयो । घिमिरेले कक्षा ५ को पढाइ पूरा गरेकै थिएनन् । ज्यामिरगढी आएर पुनः कक्षा ५ बाटै अध्ययन सुरु गरे ।
कक्षा ५ देखि एसएलसीसम्म उनले धुलाबारी माविमा पढे । २०२७ सालमा एसएलसी दिए, धुलाबारी माविबाटै ।
एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनको परिवारमा दुखद् घटना भयो- कान्छा भाइको ७ वर्षको उमेरमा निधन भयो । आमा, बुबा मर्माहत हुनुभयो, परिवार सबै शोकाकुल भयो । उनलाई पनि ठूलो पीर पर्‍यो ।
यसपछि एक वर्ष उनी घरमै बसे । त्यो एक वर्ष उनले ज्यामिरगढीमै प्रावि तहलाई पढाए ।
२०२९ सालमा मात्र त्यसबेलाको मेची महाविद्यालय (हाल मेची क्याम्पस) भद्रपुरमा उनी भर्ना भए । आईए पूरा गरेर बीए पढ्न घिमिरे विराटनगर आए । महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए ।
२०३२-२०३३ साल बीए पढेपछि उनी एमए पढ्न काठमाडौं आए । २०३५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘कल्चर’मा एमए पूरा गरे ।
यसपछिको झण्डै एक दशक उनी साझा प्रकाशनबाट प्रकाशन हुने साहित्यिक पत्रिका ‘गरिमा’मा जोडिए, स्थायी जागिरेका रूपमा । उता, पाटन संयुक्त क्याम्पस र शंकरदेव क्याम्पसमा पनि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा पढाउन थाले ।
उनले एमएको थेसिस झापाका राजवंशी जातिको संस्कृतिमा लेखेका थिए । उनलाई लाग्यो, यी राजवंशी जातिले त्योबेला औलोको व्यापक प्रकोप भएका समयमा तराई (झापा) आवादी नगरेका भए झापा अहिलेको जस्तो हुन्थ्यो ?
उनले राजवंशी जातिको झापा आवादीमा अमूल्य योगदान रहेको महसुस गरिरहेका थिए । झापा जाँदा हरेक पटक राजवंशी समुदायमा जाने र उनीहरूका भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको अध्ययन गर्ने काम गरिरहे । राजवंशी समुदायका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका सबै पक्षबारे खोजेर पठाइदिन भने ।
राजवंशीकै संस्कृतिका विषयमा उनले २०६८ सालमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सम्पन्न गरे- ‘झापामा राजवंशी जातिको संस्कृति र परिवर्तन’ शीर्षकमा ।
जागिर यात्रा : साझाका ‘प्रुफ रिडर’देखि प्राध्यापकसम्म
घिमिरेले एसएलसी दिएपछि एक वर्ष गाउँकै विद्यालयमा शिक्षण गरे । त्यसपछि उनले एमए पूरा गरुन्जेल कुनै जागिर खाएनन् ।
२०३८ सालतिर एमए सकेर बसेका थिए । उनी झापा मेची क्याम्पस पढ्दादेखि नै साहित्यमा लागिसकेका थिए । विराटनगर आएपछि उनी केही साहितयकारमाझ परिचित भइसकेका थिए ।
काठमाडौं आइसकेपछि भने उनको चिनजान र सम्पर्क अझ फराकिलो बन्यो ।
यही क्रममा २०३८ सालमै साहित्यिक पत्रकार संघले काठमाडौंमा साहित्य सम्मेलन गर्‍यो । उक्त सम्मेलनका लागि सहयोग माग्न उनी साझा प्रकाशनका तत्कालीन अध्यक्ष कवि, गीतकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीकहाँ पुगे ।
अधिकारीले घिमिरेका कविता पढेका रहेछन् पत्रपत्रिकामा । ‘राम्रा कविता लेख्छौ’, अधिकारीले भनेछन्, ‘एमए पूरा गर्‍यौ ?’
घिमिरेले आफूले भर्खरै एमए पूरा गरेको बताएछन् । र, केही दिनमै आफूलाई भेट्न भनेछन् ।
‘५ दिनपछि म क्षेत्रप्रतापलाई भेट्न गएँ’, घिमिरे सम्झिन्छन्, ‘उहाँले साझामा भाषा-शुद्धाशुद्धि सम्पादकको काम गर्न भन्नुभयो ।’
आफू संस्कृतिको विद्यार्थी, भाषा-शुद्धाशुद्धि सम्पादनको काम ! घिमिरे हच्किए ।
भने, ‘मबाट यस्तो जटिल काम कसरी सम्भव होला र !’
त्यसपछि क्षेत्रप्रतापले सहयोगीलाई खालि कागज ल्याउन भने र घिमिरेलाई आफू नजिक बोलाए ।
‘खालि कागजमा सरसरी केही शब्द लेखेर उहाँले यति त हो गर्ने, सामान्य काम हो, विस्तारै सबै जानिन्छ भन्नुभयो’, घिमिरे भन्छन्, ‘ममा त्यसपछि आँट आयो ।’
त्यसबेला कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान साझाका महाप्रबन्धक रहेछन् । प्रधान निकै कडा स्वभावका । हत्तपत्त कसैलाई विश्वास नगरिहाल्ने ।
क्षेत्रप्रतापले प्रधानसँग आफूले कुरा गर्ने बताएछन् र भनेछन्, ‘मलाई भनेजसरी केही पनि आउँदैन नभन्नू, पहिला पनि गरिरहेको यो काम भन्नू ।’
नभन्दै प्रधानलाई घिमिरेले क्षेत्रप्रतापले दिएको सुझावअनुसार नै कुरा गरे । अन्ततः साझा प्रकाशनमा भाषा-शुद्धाशुद्धि सम्पादकको जागिर पक्का ।
यसपछि बिहान शंकरदेव क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापन, दिउँसो साझा प्रकाशनमा स्थायी जागिर अनि बेलुका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा आंशि प्राध्यापन । ‘जीवन निकै व्यस्त थियो’, घिमिरे भन्छन्, ‘काममा आनन्द पनि ।’
त्यसबेला ऋद्धिबहादुर मल्लको नासो ‘शारदा’ पत्रिका बन्द भइसकेको थियो, साहित्यिक पत्रिकामा एकछत्र जस्तो थियो, ‘रूपरेखा ।’
उत्तम कुँवरको निधनपछि ‘रूपरेखा’ सङ्कटमा पर्दै थियो, लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।
त्यहीबेला एक दिन क्षेत्रप्रतापले घिमिरेलाई भने, ‘एउटा राम्रो साहित्यिक पत्रिका चाहिएला जस्तो छ, के हामी प्रकाशन गर्न सक्छौँ ?’
अधिकारीले घिमिरेलाई साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको सम्भावना र के कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ ? खाका ल्याउन भने ।
घिमिरेले केही सुझावसहित खाका दिए । क्षेत्रप्रतापले घिमिरेलाई नै उक्त पत्रिकाको सम्पादन गर्न भने ।
‘न प्रेसको कुनै ज्ञान छ, न त राम्रो सम्पादक हुने व्यक्ति नै थिएँ म’, घिमिरे भन्छन्, ‘क्षेत्रप्रतापको प्रस्तावले अत्यायो मलाई ।’
तर, अधिकारीले घिमिरेलाई यस कामका लागि पनि ‘कन्भिन्स’ गरे ।
अन्ततः घिमिरे गरिमा जस्तो महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाका संस्थापक सम्पादक बने ।
२०३८ सालदेखि २०४७ सालसम्म उनले गरिमा पत्रिकाको सम्पादन गरे ।
२०४७ सालमा त्रिविमा उपप्राध्यापकमा नाम निस्कियो । उनी दोधारमा परे- सेकेण्ड क्लास अफिसरको जागिर छ साझा प्रकाशनमा, गरिमा जस्तो साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादक भएका छन्, उता, उपप्राध्यापक (थर्ड क्लास अफिसर)मा नाम निस्कियो, के गर्ने ?
उनले सोचे, ‘प्राध्यापनमा धेरै समय खालि हुन्छ । सिर्जनशील काम गर्न पाइन्छ बचेको समय ।’
त्यसो त उनलाई पछिल्लो समय साझामा विकृति बढेको, राजनीतीकरण र खुराफात बढेको अनुभव हुनथालेको पनि थियो । आफू सोझो कर्म गर्ने स्वभावको भएकाले कसैका खुराफातमा सहभागी हुन इच्छा पनि थिएन रे उनलाई । यस कारण पनि उनले साझा प्रकाशनको जागिर छाडेर प्राध्यापन नै रोजेको बताउँछन् ।
उनी २०४७ सालदेखि स्थायी रूपमा प्राध्यापनमा प्रवेश गरे ।
लगातार २६ वर्ष स्थायी र ८ वर्ष आंशिक प्राध्यापन गरे घिमिरेले ।
प्राध्यापनको समयावधि उनको जीवनको रमाइलो क्षण भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्रिविको जागिरजति सजिलो र आनन्दको जागिर संसारमै कतै छैन सायद ।’
किन अरे भने, त्रिविमा सार्वजनिक बिदा त हुन्छ नै, त्यसका अतिरिक्त कहिले स्ववियु चुनाव त कहिले विद्यार्थीका ‘तोडफोड’ आन्दोलनका कारण पनि धेरै समय नपढाएरै बित्छ त्रिविका क्याम्पसहरूमा ।
अनि उक्त ‘बिदा’को सबैजसो समय अन्य कर्ममा लगाउन पाइने भइहाल्यो, किन मज्जा र रमाइलो नहोस् !
प्राध्यापनमा अर्को पनि सजिलो हुने उनी बताउँछन् । राजनीति गर्नेलाई, भाषण-भूषण र विरोध गर्न रुचाउनेलाई प्राध्यापन खास्साको जागिर भएको उनको बुझाइ छ ।
भन्छन्, ‘सत्तासँग रिस उठे पनि, कुनै दलसँग रिस उठे पनि मज्जाले भाषणमा विरोध गर्न सकिने, खासै डर र त्रास नहुने रहेछ प्राध्यापनमा ।’
तर, अर्कातर्फ प्राध्यापन सेवाको काम, प्राज्ञिक सम्मान हुने क्षेत्र र स्वाभिमान बढी हुने भएको पनि उनको भनाइ छ । नयाँनयाँ विद्यार्थीबाट नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राध्यापनमा हुने उनको भनाइ छ ।
प्राध्यापक हुन पाइएन तर गुनासो छैन
उनले ३ दशक प्राध्यापन कर्म गरे । उनीसँगैका र पछिका धेरै साथीहरूले नामको अगाडि ‘प्रा.’ झुण्ड्याए तर उनले त्यो अवसर पाएनन् ।
उनले निकै पछि मात्र विद्यावारिधि सम्पन्न गरे । जब उनको प्राध्यापक बन्ने बेला आयो, त्रिविले उनको विषयमा प्राध्यापक नै मागेन ।
भन्छन्, ‘मेरो समय घर्किसकेको थियो । प्राध्यापक हुने लेखेको रहेनछ । तर, मैले त्रिविबाट प्राध्यापकबाहेक सबै कुरा पाएँ ।’
उनी ३ दशकको प्राध्यापकीय जीवनमा अतिसन्तुष्ट भएको बताउँछन् ।
पत्रकारिता : साहित्यिक, रङ्ग हुँदै अखबारी
घिमिरेले ‘बाध्यात्मक’ अवस्थामा साहित्यिक पत्रिका ‘गरिमा’ सम्पादनको जिम्मेवारी पाए । उक्त जिम्मेवारी उनले कुशलतापूर्वक सम्पन्न पनि गरे । स्ंस्थापक सम्पादकका रूपमा ८ वर्षसम्म गरिमाको सम्पादन गरे ।
त्यसबीचमा अहिलेका धेरै स्थापित स्रष्टालाई चिनाउने काम उनले गरे । उसो त धेरैलाई प्रोत्साहन पनि गरे साहित्य लेखनमा, गरिमाका माध्यमबाट ।
उनले केही समय रङ्ग पत्रकारिता पनि गरे । विमोचन मासिकका सम्पादक भएर नेपालको कला र साहित्यका क्षेत्रमा पत्रकारितामार्फत योगदान गरे ।
साहित्य र कला पत्रकारिता त उनले गरेकै थिए । अब अखबारी पत्रकारितातिर पनि केही समय अनुभव लिने सोच आयो उनमा । त्यसबेलाको राम्रै अखबार मानिन्थ्यो, ‘सुरुचि’ साप्ताहिक । त्यसका सम्पादक थिए, शिव अधिकारी ।
शिव गोरखापत्रमा नियिुक्त भएपछि उक्त अखबार हेर्नुपर्ने भयो घिमिरेले । घिमिरे त्यही अखबारमा ‘याम÷आयाम’ स्तम्भ लेख्थे ।
घिमिरेले केही समय सुरुचिको सम्पादकीय नेतृत्व लिए ।
यसका अतिरिक्त अन्य स्मारिका, पुस्तकहरूको सम्पादनमा पनि उनी आजसम्म क्रियाशील छन् ।
पत्रकारिताका सम्झनायोग्य क्षण
घिमिरेले साहित्यिक, कला र समसामयिक तीनै प्रकारका पत्रपत्रिकाको नेतृत्व गरे । यस क्रममा उनले भोगेका र अनुभव गरेका केही रमाइला, नमीठा र स्मरणयोग्य सन्दर्भ छन् ।
गरिमाका सम्पादक हुँदैका केही घटना अझै सम्झिन्छन् उनी ।
घिमिरे आफू स्तरीयतामा सम्झौता नगर्ने सम्पादक भएको बताउँछन् । रचनाको स्तरमा सम्झौता गरियो भने सर्जक र पत्रिका अनि सम्पादक तीनै पक्ष कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।
यस क्रममै एक पटक प्रसिद्ध साहित्यकार दौलतविक्रम विष्टको कथा आएछ गरिमामा, ‘आँसु त्यसैत्यसै छचल्किन्छ’ शीर्षकमा । कथा रहेछ ३२ पेज लामो ।
घिमिरेले पढदै गएछन्, स्थापित र अग्रज अनि त्यसताकाका भव्य साहित्यकार विष्टको उक्त कथा पढिसकेपछि घिमिरेलाई लागेछ, ‘यो कथाले त विष्टको स्तर धान्दैन ।’
उनी अलमलमा परेछन्, ‘यति ठूला साहित्यकारको सिर्जना कसरी नछापूँ ? छापुँ भने स्तर धान्दैन ।’
अन्ततः विष्टलाई भेटेरै कुरा गर्ने निधो गरे ।
विष्टकहाँ कथा लिएर गए घिमिरे । अप्ठ्यारो मानीमानी अकमकिँदै भने, ‘दाजु, कथा पाएँ । जतिचोटि पढे पनि यसमा अनावश्यक गन्थन बढी भएको मात्र देखेँ । यसलाई छोट्याएर १२ पेजजतिमा झार्न सकिन्छ र यो अत्यन्त राम्रो बन्छ ।’
एकै सासमा यति भन्नेवित्तिकै विष्टले खुसी हुँदै भने, ‘राम्रो कुरा गर्‍यौ । तिमीले नै सम्पादन गरेर छोट्याएर छाप ।’
अन्ततः उक्त कथा निकै चर्चित पनि बनेको घिमिरे बताउँछन् ।
अर्को सन्दर्भ यस्तै छ । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ एक दिन पानी परिरहेका बेला छाता ओढेर गरिमामा आए । घिमिरेले भने, ‘म आफैँ तपाईंकहाँ आइहाल्थेँ नि, किन दुःख गर्नुभएको ?’
सिद्धिचरणले भने, ‘भाइहरू कसरी काम गर्दै छन्, के गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न आएको नि !’
सिद्धिचरणले एउटा कविता छाडेर गएछन् गरिमाका लागि, जुन ३२ स्टान्जाको रहेछ ।
उक्त कविता त कविता भन्नु मात्र रहेछ । सिद्धिचरण जस्ता भव्य कविले लेखेको कविता, जुन कविता नै छैन, कसरी कविता भएन भन्नु ? अत्यन्त सङ्कट आइलाग्यो घिमिरेलाई ।
घिमिरेले महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानलाई यो कुरा भने । ‘यो कवितामा त ८ वटा स्टान्जाबाहेक कुनै पनि कविता छैन । बाँकी २४ स्टान्जा निराशा र कुण्ठाले भरिएको छ ।’
घिमिरेलाई लाग्यो, ‘कवि, कलाकारले नै निराशा र कुण्ठा मात्र पोख्ने हो भने समाज कता जाला ?’
प्रधानले भनेछन्, ‘काजी (सिद्धिचरणलाई प्रधान काजी भन्थे रे !)लाई भेटेर भन्न सक्छौ त ?’
‘भन्ने प्रयास गर्छु’ भनेछन् घिमिरेले ।
घिमिरे उक्त कविता बोकेर पुगे सिद्धिचरणकहाँ । र, भने, ‘अस्ति तपाईंले दिएको कविताबारे कुरा गर्न आएको ।’
‘भन न’, सिद्धिचरणले भने ।
घिमिरेले हतारमा डराउँदै भने, ‘यो कवितामा त ८ स्टान्जा मात्र कविता छ, बाँकी निराशा र कुण्ठा ।’
सिद्धिचरण केहीबेर चुप रहे । अब राम्रै दनक भेटिने भयो, ‘तँ फुच्चो कविता सिकाउने मलाई ?’ भन्लान् भन्ने त्रास घिमिरेमा थियो ।
भयो अचम्म !
घिमिरेको काँधमा धाप मार्दै सिद्धिचरणले भने, ‘ठीक भन्यौ । हामी अब बूढा भयौँ, गल्ती-कमजोरी बढ्छन् । तिमीले मलाई बेलैमा सच्यायौ । त्यही ८ स्टान्जा मात्र छाप ।’
प्रसिद्ध र खरो समालोचक डा. तारानाथ (ताना) शर्मासँगको अर्को सन्दर्भ छ सम्झिनलायक ।
त्यसबेला गरिमामा २ वटा नियम बनाइएको रहेछ- लेखकको पारिश्रमिक घरमै पुर्‍याइदिने र आगामी अंकका आकर्षण वा अउने अंकमा छापिने सामग्री अघिल्लै अंकमा जानकारी दिने ।
एक दिन ताना शर्मासँगको भेटमा घिमिरेलाई शर्माले भने, ‘ए सम्पे (गरिमाका सम्पादक भएकाले घिमिरेलाई शर्माले सम्पे भन्थे रे !), सबैका लेख, रचना मागेर छाप्छौ, मलाई त माग्दैनौ पनि !’
ठट्टा गरेका ठानेर घिमिरेले भने, ‘अहिल्यै दिनुस् न त छापिहाल्छु नि !’
‘साँच्चै यही अंकमा छाप्छौ ?’, उत्साहित हुँदै शर्माले भनेछन् ।
शर्माले कफी खुवाउन भनेछन् र त्यहीँ बसेर केहीबेरमै एउटा लेख तयार पारेछन् ।
घिमिरे भन्छन्, ‘छापा जस्ता सुन्दर अक्षरमा ताना शर्माले भाषा-व्याकरणका प्रशस्त उदाहरणसहित यति सुन्दर र सशक्त लेख लेख्नुभयो कि म निकैबेर चकित परेँ ।’
उनले आफैँले बनाएको नियम मिचेर त्यही अंकमा उक्त सामग्री छापे ।
‘म शर्माका अगाडि हारिसकेको थिएँ’, घिमिरे भन्छन्, ‘नियम मिचेरै उक्त लेख छापेँ । त्यसमा गर्व छ र शर्माप्रति सम्मान पनि ।’
अखबारी पत्रकारिताका रमाइला र नमीठा सन्दर्भ पनि छन् उनीसँग ।
उनी सुरुचि साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक थिए । त्यसबेला अहिले जस्तो प्रविधि थिएन । त्यसमाथि साप्ताहिक पत्रिकामा काम भनेको छापिने अघिल्लो रात हुने ।
तन्नेरी वयका पत्रकारहरूसँग काम गर्नुपर्ने । ठिटाहरूमा छुट्टै जोश ।
राती हुँदै गएपछि अलिअलि ‘धमिलो पानी’ चढाएपछि रिपोर्टर ठिटाहरू रमरम भइहाल्ने ।
अनि भन्दारहेछन्, ‘दाइ, आज कसलाई सिध्याइदिऊँ ?’
‘सिध्याइदिऊँ’ भन्नाले कसको बद्खवाइँ गरौँ वा कसलाई आलोचना र गाली गरेर हुर्मत लिऊँ समाचारमा ? भन्ने आसय हुन्थ्यो रे !
‘केटाहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्दाको हैरान’, घिमिरे भन्छन्, ‘उमेर, जोस अनि थोरै दारुको तालको कमाल थियो त्यो ।’ अहिले तिनै ‘जोसिला’ ठिटा राम्रै पत्रकारमा गनिन्छन् रे !
त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य शक्तिकेन्द्रका धम्की, गुनासा र तनावको त हिसाब नै नहुने घिमिरे बताउँछन् ।
अर्को सन्दर्भ छ विमोचन पत्रिकामा हुँदाको ।
एक पटक एक जना रिपोर्टरले विमोचनका लागि नर्सका बारे आवरण कथा तयार पारे । त्यसमा नर्सहरू पनि वेश्यावृत्तिमा लाग्ने गरेको भन्ने आसय आएछ ।
नर्सहरू आएर अफिस घेरे । घिमिरेले आफैँ नर्सहरूको कार्यालयमा आएर कुरा गर्ने भने र केही साम्य भयो ।
भोलिपल्ट नर्सिङ संघको कार्यालय गए घिमिरे एक जना साथी लिएर । उनी पुग्नेवित्तिकै डेढ सयको संख्यामा रहेका नर्सले तथानाम भनेर आगै बाले रे !
घिमिरे सामु चुपचाप उनीहरूको भनाइ खानु र खप्की सहनुको विकल्प थिएन । हाँसीहाँसी सबै कुरा सहिरहे ।
‘हरेक काम गर्ने मान्छेका कमजोरी हुन्छन् । ती कमजोरी स्वीकार गरेर सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘पत्रिकाको नेतृत्वका हिसाबले त्यो मेरो कमजोरी थियो, सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएँ, साम्य भयो ।’
घिमिरेले विशेषगरी प्राध्यापन र साहित्य अनि पत्रकारितामा आफ्नो जीवनको धेरै समय बिताए ।
उनी साहित्यिक पत्रकारितामा लामो समय रहे भने अखबारी पत्रकारितामा केही समय ।
उनले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न समितिमा बसेरसमेत काम गरे ।
यसका अतिरिक्त उनले २ दशकअघि जुन संस्थामा ८ वर्ष जागिर खाए, त्यही संस्था अर्थात् साझा प्रकाशनका अध्यक्ष बने २०५६ सालदेखि २०६० सालसम्म र २०६३ सालदेखि २०६४ सालसम्म, २ पटक ।
प्रजातान्त्रिक लेखक, स्रष्टाहरूको साझा सङ्गठन नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष बने, २०६८ सालमा ।
त्यसपछि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गणतन्त्रपछिको दोस्रो टिममा उपकुलपति बने घिमिरे, २०७१ सालमा ।
विष्णुविभू घिमिरे मूलतः कवि हुन् । कविकै रूपमा उनको विशिष्ट पहिचान बनेको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै कविताप्रति आकर्षित घिमिरेको खास कवित्व भने मेची क्याम्पस पढ्दादेखि प्रस्फुटन हुन थालेको हो ।
कृष्ण प्रधान, विष्णु राई जस्ता साहित्यिक मित्रको सङ्गत अनि डा. चूडामणि बन्धु जस्ता दिग्गज विद्वानको सद्भावले उनको कवित्वलाई मलजल गरेको बताउँछन् ।
त्यहीँ मेची क्याम्पस पढ्दै गर्दा उनमा पठन रुचि पनि बढ्दै गयो । उनमा पठन रुचि कसरी बढ्यो ? भन्नेबारे रमाइलो सन्दर्भ रहेछ ।
कृष्ण प्रधान र उनी एउटा घरमा डेरा गरी बस्थे । उक्त घर रहेछ, त्यसबेलाका क्रान्तिकारी सीपी मैनालीको ।
उनीहरू बसेको फ्ल्याटको बीचको ठूलो कोठामा सधैँ ताला लगाएको हुने रहेछ । उनीहरूलाई जिज्ञासा भइरहेको ।
एक दिन घरभेटी बा अर्थात् सीपी मैनालीका बुबा आएर त्यो कोठाको चाबी दिँदै भनेछन्, ‘बाबुहरू, यो चाबी बोकेर कति हिँड्नु, तपाईंहरू नै राखिरहनुस् है ! म आउँदा चाहिएको बेला दिनु ।’
घिमिरेले प्रधानलाई भनेछन्, ‘यो कोठामा के रहेछ, खोलेर हेर्न मन छ ।’
प्रधानले अर्काको चिज हेर्न, कोठा खोल्न नहुने भनेछन् तर अन्ततः कोठा खोलेछन् ।
कोठा खोलेर हेर्दा तीनछक्क परेछन् घिमिरे र प्रधान । ‘वाफ्रे ! कोठाभरि किताब । कति धेरै किताब भने त्यहाँ कुनै पनि क्षेत्रका किताब नभएका थिएनन् जस्तो’, घिमिरे भन्छन्, ‘अंग्रेजी, नेपाली, हिन्दी राजनीति, समाज, संस्कृति र साहित्यका धेरै किताब थिए ।’
तिनै किताब पढ्ने बानी लाग्यो घिमिरेलाई । कोठा खोल्दै, मनपरेका किताब पढ्दै राखिदिँदै गर्न थाले । यसले उनमा पठन रुचि जगाएको बताउँछन् ।
विराटनगरमा बीए पढ्न आएपछि उनको सङ्गत महेश प्रसाईं, अशेष मल्ल, नारायण तिवारी, इन्दिरा शर्मा, प्रमोद प्रधान, कृष्णभूषण बलहरूसँग भयो । कविगोष्ठी, कविता गफ हुन थाले ।
उनीहरूले त्यसबेलै युवा साहित्य परिवार गठन गरे र हरेक शुक्रबार भेला भएर कविता सुन्न, सुनाउन थाले । त्यसबेला स्वर्गवासी कवि, लेखकका बारे कोही एक जनाले लेखेर ल्याउने अनि तिनै स्वर्गवासी कवि, लेखकलाई कार्यक्रमको सभापति राख्ने परम्परा बसाए ।
त्यतिबेलै उक्त संस्थाले २ वटा साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन गर्‍यो- प्रयोग- १ (मुक्तकसङ्ग्रह) र प्रयोग- २ (लघुकथासङ्ग्रह) ।
त्यसपछि घिमिरे एमए पढ्न काठमाडौं आए । काठमाडौं आएपछि उनको सङ्गत र उठबस निकै अग्रज र प्रसिद्धदेखि नयाँ पुस्ताका स्रष्टाहरूसम्म भयो । यसले उनमा ऊर्जा, उत्प्रेरणा र धेरै कुराको ज्ञान दिएको बताउँछन् ।
‘काठमाडौं आएपछि त ठूला साहित्यकारसँग परिचय भयो । राम्रा र चर्चित समकालीनहरूसँग पनि भेट भयो’, घिमिरे भन्छन्, ‘राम्रा साहित्यिक पत्रिकामा पहुँच पनि भयो । लेखनमा तीब्रता र स्तरीयता पनि आयो ।’
उनले काठमाडौं आउनुअघि नै झापा र विराटनगरमा रहँदै ८ सयभन्दा बढी कविता लेखिसकेका थिए । भन्छन्, ‘ती सबै डायरी पाखा लागे, कारण- लेखनमा स्तरीयता आउन बाँकी नै रहेछ मेरो । म त कविता जस्तै मात्र लेखिरहेको रहेछु ।’
पछि काठमाडौं आएपछि लेखिएका आफ्ना रचनामा भने उनले कविता पाए । त्यसपछि मात्र कविताकृति प्रकाशनबारे सोचे र जन्मियो- ‘कठघरामा उभिएर, २०४५ ।’
उक्त कविताकृति प्रकाशन भएको लामो समयपछि २०५८ सालमा मात्र उनले दोस्रो कविताकृति ‘काँडाकाँडामा टेकेर’ प्रकाशनमा ल्याए ।
उनले यहीबीच टेलिफिल्म ‘जनैको साँचो’ पनि लेखे ।
उनले बीचमा केही कथा लेखेका छन् तर ती प्रकाशन गरेका छैनन् । ‘केही समयमा प्रकाशन गर्ने सोचमा छु’, उनी भन्छन् ।
उनले विभिन्न समसामयिक, साहित्यिक लेखहरू, टिप्पणी र समीक्षा पनि लेख्दै आएका छन् ।
चाँडै नै अर्को कवितासङ्ग्रह प्रकाशनको तयारीमा रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
उनी र अन्य साथीहरू दिनेश अधिकारी, अशेष मल्ल र गगन विरही मिलेर २०३८ सालतिरै विलयन (संयुक्त) कविता लेखनको अभ्यास गरेको बताए ।
उक्त कविता मधुपर्कमा छापिएको घिमिरे बताउँछन् । पछि उक्त कविता उनीहरूले पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरे- ‘एउटा वस्तीको कथा ।’
कुरा २०३८ सालतिरकै हो । विष्णुविभू, दिनेश अधिकारी, गगन विरही र अशेष मल्ल निकै मिल्थे । उनीहरूको युवा जोसले एउटा सिर्जनशील तर फरक आइडिया फुरायो- कविताको क्यासेट निकाल्ने ।
त्यसबेला गीतका क्यासेट त निस्किन्थे तर कविताको क्यासेट भने थिएन ।
रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेडियो नेपाल, रत्न रेकर्डिङ संस्थान र म्युजिक नेपाल मात्र थिए ।
उनीहरूले २०३८ सालमै ‘कविताको मौसम’ शीर्षकमा कविता क्यासेट निकाले आफ्नै आवाजमा । उद्घोषक किशोर पहाडी थिए ।
‘४ जनाका ५-५ वटा कविता राखेर उक्त क्यासेट निकाल्यौँ’, घिमिरे भन्छन, ‘यो त्यसबेला नयाँ प्रयोग थियो ।’
कविता लेख्नु जोखिम थियो पञ्चायतकालमा । प्रायः विद्रोही कविता लेखिन्थे त्यसबेला । राजाको प्रत्यक्ष शासन, निर्दलीय पञ्चायतको विरोधमा लेखिएका हुन्थे त्यसबेलाका साहित्य ।
दिनेश अधिकारी त्यसबेला सरकारी जागिरे थिए, त्यसमाथि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत जङ्गी अड्डामा ।
घिमिरे र दिनेश मिलेर संयुक्त कविता लेखे, १० पंक्तिको । उक्त कविता ‘राष्ट्रपुकार’ पत्रिकामा छापियो ।
कविता पढेपछि अञ्चलाधीशबाट वारेन्ट जारी भयो । केही समय दुवै जना भूमिगत बने । घिमिरेलाई भन्दा पनि दिनेशलाई बढी गाह्रो थियो किनभने उनी सरकारी जागिरे थिए र सेनाकै कार्यालयमा काम गर्थे ।
‘धन्न ! दिनेशको जागिरमा भने दिनेशहरि अधिकारी थियो नाम’, घिमिरे भन्छन्, ‘कवितामा दिनेश अधिकारी मात्र लेख्छन् ।’
पछि अञ्चलाधीशकहाँ गएर बयान दिए । बयान लिनेले उनीहरूका कविता पढेको रहेछ । राम्रो व्यवहार गरेर आदरपूर्वक बयान लिएको घिमिरे सम्झिन्छन् ।
‘तर, कविता १० लाइनको थियो, त्यही १० लाइनको कवितामा ४० वटा प्रश्नको उत्तर दियौँ’, घिमिरे भन्छन् ।
अञ्चलाधीशले ‘पढालेखा, युवा, राम्रो गर्न सक्नेले नबरालिनू’ भनेर सुझाव दिएर छाडेको घिमिरे बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३१, २०७७, १३:३२:००